OPPO A15 - Al Triple Camera, 6.52'' Big Screen | OPPO မြန်မာ
OPPO A15 ၏ AI နည်းပညာသုံး ကျောဘက်ကင်မရာသုံးလုံးသည် သင့်စိတ်ကူးထဲမှဓါတ်ပုံများရရှိအောင် အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ 13MP ရှိ ပင်မမှန်ဘီလူးက ရုပ်ပုံများကို ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိအောင် ပုံဖော်ပေးနိုင်ပြီး 2MP မိုက်ခရိုမှန်ဘီလူးက ရုပ်ပုံများကို အသေးစိပ်ကျကျ အနီးကပ်ဆွဲယူ ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအတွက် 2MP depth မှန်ဘီလူးမှ အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးပါသည်။
အလှပြုပြင်ပေးခြင်းစနစ်ပါဝင်သော OPPO A15 ဖြင့် သင့် Selfie ဓါတ်ပုံတိုင်းအား တမူထူးခြားသောအလှတရားများ ပြည့်နက်နေအောင် စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်လိုက်ပါ။ ကျား/မ ခွဲခြားပေးခြင်း၊ အသက်အရွယ်၊ ဒေသနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းကိုလိုက်၍ သင်၏ မျက်နှာအား အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မည့် အသားအရေနှင့် အရောင်ကို ရရှိအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါသည်။
ရှေ့ကြည်နောက်ဝါးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဟက်ဝဲလ်အဆင့်မှာတွင်ပင် ရိုက်ကူးလိုသော အရာဝတ္ထုအား ပိုမိုရုပ်လုံးကြွစေပြီး အနောက်ဖက်ရှိ နောက်ခံအား သဘာဝကျကျ ဝေဝါးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အနောက်ဖက်အလင်းရောင်ပေးချိန်တွင်ပင် HDR သည် ဆက်လက်ကြည်လင်ပြတ်သားနေမည်ဖြစ်ပြီး အနောက်ဖက်ပုံရိပ်များကိုလည်း အသေးစိတ်ကျကျ ပုံဖော်ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
AI နည်းပညာသုံး၍ ရိုက်ကွင်းအလိုက် လှပအောင် ပုံဖော်ပေးနိုင်ခြင်း
AI နည်းပညာသုံး၍ ရိုက်ကွင်းအမျိုးအစားကို ၂၁ မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး တစ်ခုချင်းစီနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိအောင်ပုံဖော်ပေးနိုင်သောကြောင့် သင့်ပုံရိပ်များကို ပိုမိုကျစ်လစ်လှပစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းပွင့်လေးလား၊ အစားအသောက်တွေလား၊ အသေးငယ်ဆုံးသော ပုံရိပ်များကို 4cm အကွာအဝေးမှပင် ကြည်လင်ထင်ရှားမှုရှိအောင် အသေးစိပ်ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
မျက်ဝန်းမှ မခွာနိုင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သည့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်
ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နေရောင်အောက်မှာတွင်ပင် အရာအားလုံးကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
3D နောက်ဖုံးနှင့် ပါးလွှာသောပုံစံရှိသည့် OPPO A15 က လှပရုံမျှမက လက်မလွှတ်တမ်းစွဲကိုင်ထားချင်အောင် သင့်ကိုစွဲဆောင်နေပါလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်စရာ အရောင် ၂ ရောင်ရှိပြီး သင့်အကြိုက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မည့်အရောင်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
လက်ဗွေအာရုံခံစနစ်နှင့် AI နည်းပညာသုံး မျက်နှာပြင်ဖတ် ဖုန်းဖွင့်ခြင်းစနစ်တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် OPPO A15 ကိုအသုံးပြုရန် တစ်ချက်ထိရုံ သို့မဟုတ် အကြည့်တစ်ချက်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ OPPO ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြစ်သော မျက်နှာအား မှတ်သားခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပေးနိုင်သည့်စနစ်သည် မျက်နှာပေါ်ရှိ ထူးကြားသော အမှတ်အသား ၁၂၈ ခုကို မှတ်သားခွဲခြားပေးနိုင်ပြီး အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
OPPO A15 ကို တန်ဖိုးကြီးသည့် 32GB သို့လှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် စတင်မှုပြုထားသည်။ ထိုပမာဏထက်ပိုမိုလိုအပ်ပါက 256GB အထိ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကို စိတ်ကြိုက်တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ အစွမ်းထက်သည့် Octa-coee ပရော်ဆက်ဆာက ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းတို့တွင် လဂ်မဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
256GB အထိ တိုးမြှင့်နိုင်မှု
ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ထိတွေ့တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းတို့တွင် သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိလာခြင်း
အရာရာတိုင်းရပ်တန့်မသွားဘဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားနိုင်မည့် ဘက်ထရီ
4230mAh ဘက်ထရီက သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အပြည့်အဝ လုံလောက်မှုရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းဖို့ ရပ်တန့်စောင့်စားရန်မလိုဘဲ အွန်လိုင်းမှတဆင့် HD ဗီဒီယိုများအား ၁၆ နာရီကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ ၆ နာရီကြာ မနားတမ်းဂိမ်းဆော့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ အိပ်ချိန်အလေ့အထကို လေ့လာမှတ်သား၍
ညအိပ်ချိန်အတွင်း ပါဝါစားနှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
အသစ်အသစ်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုများက အလင်းလျှော့ထားသော Dark Mode တွင်ပင် သင့်အတွက် အရေးပါမည့် အချက်အလက်များအား အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။
ဖိုင်များ ရယူခြင်း၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော app များကို အလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသဖြင့် များစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်။
ဖုန်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အသုံးပြုချိန်တွင် အိုင်ကွန်များကို ဆွဲချုံ့နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖုန်းအသုံးပြုရ လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။
OPPO ၏ စံချိန်စံညွှန်း
OPPO အနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့် ထိုက်တန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်လက်ထဲသို့ ဖုန်းကိုအရောက်မပို့မှီ အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေး လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အသုံးဝင်မှုစသည်တို့ ရရှိအောင် မြောက်များစွာသော ပြင်းထန်သော စမ်းသပ်မှုများကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
USB Port တပ်ခြင်း စမ်းသက်ချက်
10cm မှ ပစ်ချစမ်းသပ်ခြင်း
1. 6.52'' သည် ရုပ်ထင်ဖန်သားအား ထောင့်ဖြတ်အနေအထားတွင် တိုင်းယူရရှိသော အလျားဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးဝိုင်းလေးခုအား ပွိုင့်ယူတိုင်းတာထားခြင်းဖြစ်သည်။ (ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ်ရရှိမည့် အရွယ်အစားသည် အနည်းငယ် သေးငယ်နိုင်သည်။)
2. 4230mAh သည် ဘက်ထရီ၏ ပျမ်းမျှ စွမ်းရည် capacity ဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံး capacity မှာ 4100mAh ဖြစ်သည်။
3. OPPO A15 သည် ၁၆ နာရီကြာ အွန်လိုင်းဗီဒိယိုကြည့်ရှုနိုင်၍ ၆ နာရီကြာ အွန်လိုင်းဂိမ်းများဆော့ကစားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းစမ်းသပ်ချက်ကို OPPO တွင်စမ်းသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ကြည့်ရှုဆော့ကစားနိုင်သောအချိန်သည် မတူညီသော အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားနိုင်မှုရှိသည်။
4. ထုတ်ကုန်၏ ဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန် အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာချိန်တွင်ဖော်ပြမည့် ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသာ အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူအပြောင်းအလဲကြောင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ယခုစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသော အချက်အလက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်ခန်းမှရရှိသော စမ်းသပ်ချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများထံမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စက်ပစ္စည်းဗားရှင်းစသည်။